Hordhac Manchester United Oo Soo Dhaween Doonta Rostov Lugta Labaad Tartanka Europa League Iyo Xaqiiqooyinka Kulanka | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » Europa League » Hordhac Manchester United Oo Soo Dhaween Doonta Rostov Lugta Labaad Tartanka Europa League Iyo Xaqiiqooyinka Kulanka
Hordhac Manchester United Oo Soo Dhaween Doonta Rostov Lugta Labaad Tartanka Europa League Iyo Xaqiiqooyinka Kulanka	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 16-March-2017
Kooxaha Rostov iyo Manchester United ayaa ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford lugta labaad ee tartanka UEFA Europa League wareegiisa 16-dhamaadka.
Weeraryhanaka kooxda United Anthony Martial ayaa seegaya ciyaartan maadaama uu dhaawac qabo halka Luke Shaw iyo Bastian Schweinsteiger ay u diyaar garoowayaan kulanka caawa in ay ciyaaraan.
FC Rostov ayaa weyndonta kabtan kooda Aleksandr Gatskan mana jiraan wax xaqiiq ah oo booxin kara booska ciyaaryahanka iyadoo la xasuusto ciyaartii hore in ay kusoo idlaatay 1-1.
Xidiga qadka dhaxe ugu ciyaara kooxda United Marouane Fellaini ayaa yiri “koox walba waxaa ay u dagaalameysa sida ay uga mid noqon laheyd kooxaha Ciyaarayya Champions league, dhankeenuna waan ku dadaaleynaa sida aan uga mid noqon laheyn”.
Kooxaha: Manchester United Vs Fc Rostov
Garoonka: Old Trraford.
Kooxahan ayaa ku wada ciyaaray markooda ugu horeysay dalka Russia halka Rostov ay tirsamin inta mar ay kusoo ciyaartay dalka England.
Safarka kooxda Rostov oo ay usoo socdaaleyso Manchester ayaa wuxuu gaarayyaa 3,000.km.
Manchester United ayaa rikoor wanaagsan ka wadata 10-kii kulan ay la ciyaartay kooxaha Russia labo wey guuleysatay, todobo bar baro halka midka kalana laga adkaaday, kulankii ay guuldareysatay wuxuu ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda Zenit St-Petersburg sanadii 2008 tartanka UEFA Super Cup waxaana looga soo adkaaday 2-1.
United ayaa guuleysatay dhamaan afartii kulan ay ku ciyaartay gurigeeda tartanka Europa league xili ciyaareydkan taasoo ay xusid mudantahay in 12-goal ay dhalisay 1-goal kaliya laga dhaliyey.
United ayaa waligeed ku guuleysan tartamda Europa League Iyo UEFA Super Cup waxeyna dooneysa sanadan qaado Europa league.
Rostov ayaa soo adkaan shantii kulan u danbeysay tartamada Europ oo ay kusoo ciyaartay meel ka baxsan gurigeeda seddex bar baro labane waa laga adkaaday.